Lalao sy fampiharana maimaimpoana na amidy mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Lalao sy fampiharana maimaimpoana na amidy mandritra ny fotoana voafetra
Androany amin'ny Actualidad iPhone dia mitondra anao tsy mampino aho fisafidianana lalao sy fampiharana maimaim-poana na misy fihenam-bidy mahaliana ho an'ny iPhone, iPad ary iPod Touch. Misy kely ny zava-drehetra, manomboka amin'ny lalao ho an'ny ankizy kely ka hatramin'ny ady mihosin-dra, ary koa ny fampiharana ho an'ny zavatra rehetra azonao eritreretina.
Aza hadino fa mandritra ny fotoana voafetra ireo vidiny ireo. Azoko antoka fotsiny izany manan-kery ny tolotra amin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity satria ny mpanamboatra tsy manondro rehefa tapitra ny fampiroboroboana. Noho izany, raha misy mahaliana anao ny iray amin'izy ireo, dia aza misalasala segondra iray hafa hahazoana izany.
1 Lalao sy fampiharana maimaimpoana
1.1 2D - Hoso-doko, sary, sarisary, collage
1.2 VoiceClock - miresaka
1.3 Diska USB virtoaly sy mpizaha rakitra [Pro]
1.4 Reversi vaovao - Lalao Othello toy ny paikady sy ny lalao lojika
1.5 Ady Super Tank
1.6 Keymoji: Keyboard Emoji
1.7 Mpamafa sary - Esory ireo zavatra tsy ilaina amin'ny sary
1.8 Fiara abidia
1.9 TopScanner: PDF Scanner App
1.10 Baby Piano HD
2 Lalao sy fampiharana mihena
2.3 Fanamarihana MetaMoJi - fakana an-tsoratra ary fampiharana an-tsoratra PDF
2.4 Korontana vava vola aminy, Ⅲ
2.5 Caramel - mpamokatra effets Crunch sy Crusher
2.7 FANTASY FANTASY Ⅸ
Lalao sy fampiharana maimaimpoana
Ireto lalao sy fampiharana manaraka ireto dia voaloa, fa raha maika ianao dia azonao atao maimaimpoana. Inona no andrasanao?
2D - Hoso-doko, sary, sarisary, collage
«App Art vaovao ho an'ny Mpamolavola sy Artista izay maniry zavatra bebe kokoa noho ny fampiharana mahazatra ny Paint and Draw».
Ny vidiny mahazatra dia 3,99 euro ary ankehitriny dia azonao atao ny misintona azy maimaim-poana.
VoiceClock - miresaka
Ny vidiny mahazatra dia 0,99 euro ary ankehitriny dia azonao atao ny misintona azy maimaim-poana.
Diska USB virtoaly sy mpizaha rakitra [Pro]
Hard drive virtoaly ho an'ny iPhone sy iPad izay ahafahanao mitahiry karazana lahatsoratra, feo, raki-tsary, mijery azy ireo, mamindra azy ireo ary miaro azy ireo miaraka amin'ny teny miafina aza.
Reversi vaovao - Lalao Othello toy ny paikady sy ny lalao lojika
Lalao kilalao izay tsy maintsy hametrahanao ny fitsapana stratejika sy ny lojika.
Ny vidiny mahazatra dia 2,99 euro ary ankehitriny dia azonao atao ny misintona azy maimaim-poana.
Lalao ady mahafinaritra izay ny tanky no mpilalao fototra.
Ny vidiny mahazatra dia 4,99 euro ary ankehitriny dia azonao atao ny misintona azy maimaim-poana.
Keymoji: Keyboard Emoji
Keymoji dia natokana ho an'ny iOS ary adikao amin'ny fotoana tena izy ny zavatra rehetra soratanao amin'ny fampiharana rehetra ho emoji, avy amin'ny rakibolana fampiroboroboana emoji fitomboana tsy mitsaha-mitombo. Tsy mieritreritra intsony momba ny emoji mety indrindra.
Keymoji dia miasa ao anatin'ny Snapchat, Facebook, WhatsApp, Email, iMessage, Kik, Line, Kakao Talk, WeChat, Notes, Twitter, sns.
Ny vidiny mahazatra dia 9,99 euro ary ankehitriny dia azonao atao ny misintona azy maimaim-poana.
Mpamafa sary - Esory ireo zavatra tsy ilaina amin'ny sary
Photo Eraser dia mpikirakira sary mora ampiasaina esory ireo zavatra, olona, ​​soratra, sonia, tandavan-drano, tsy fahatanterahana amin'ny hoditra, tranobe na singa hafa tsy ilaina amin'ny sary. «Ny mena fotsiny no tokony asio marika ireo faritra tsy ilaina; Photo Eraser dia hanatsara ny sarinao ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny vidiny mahazatra dia 1,99 euro ary ankehitriny dia azonao atao ny misintona azy maimaim-poana.
"Tadiavo ny litera marina amin'ny teny nomena amin'ny alàlan'ny findainao ho flyer ary ampianaro ny zanakao hanao tsipelina amin'ny fomba mahafinaritra sy mahasarika."
TopScanner: PDF Scanner App
Scanner ho an'ny iPhone na iPad anao izay hahafahanao manova sy mizara ny antontan-taratasy rehetra, sary, sns izay novainao ho endrika PDF
Lalao sy fampiharana mihena
Ny vidiny mahazatra dia 4,99 euro ary ankehitriny dia afaka mampidina azy amin'ny € 1,99 fotsiny ianao.
Ny vidiny mahazatra dia 1,99 euro ary ankehitriny dia azonao atao ny misintona azy amin'ny € 0,99.
Fanamarihana MetaMoJi - fakana an-tsoratra ary fampiharana an-tsoratra PDF
Ny vidiny mahazatra dia 7,99 euro ary ankehitriny dia azonao atao ny misintona azy amin'ny € 4,99.
Korontana vava vola aminy, Ⅲ
Ny vidiny mahazatra dia 19,99 euro ary ankehitriny dia azonao atao ny misintona azy amin'ny € 9,99.
Caramel - mpamokatra effets Crunch sy Crusher
Ny vidiny mahazatra dia 4,99 euro ary ankehitriny dia azonao atao ny misintona azy amin'ny € 2,99.
FANTASY FANTASY Ⅸ
Ny vidiny mahazatra dia 20,99 euro ary ankehitriny dia azonao atao ny misintona azy amin'ny € 16,99.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Lalao sy fampiharana maimaimpoana na amidy mandritra ny fotoana voafetra
victorbayas dia hoy izy:
Ankasitrahana ny fandraisana anjara
Mamaly an'i victorbayas
Viber fanavaozana amin'ny alàlan'ny fanampiana hafatra eo noho eo
Ampio ny Touch Bar amin'ny Mac noho ny iPad sy ny fampiharana Duet Display